कपडा भर्सेस डिसपोजेबल सेनेटरी प्याड – HamroKatha
जीत कस्को होला !
कपडाले बनेको सेनेटरी प्याड लगाउँदा हामीलाई के फाइदा ? नरम सुतीको कपडाको प्रयोगले योनीमा हावाको आवतजावत उच्च राख्दछ । यो प्रयोग गर्दा छालामा डाबर आउँदैन। पुर्न प्रयोग गर्न नमिल्ने डिस्पोजेवल प्याडको सिन्थेटिक फाइबरले योनीलाई सुख्खा बनाउँछ । योनीको प्राकृतिक चिसोपना नहुँदा महिलाहरूलाई धेरै पेट दुख्छ । कपडाको प्याडको प्रयोगले दुखाइलाई कम गर्छ । कुनै पनि केमिकलको प्रयोग नहुँदा अन्य पाठेघर सम्बन्धित रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ । वातावरण स्वच्छ रहन्छ ।
हाम्रो कथा २०७६ साउन २ गते १३:४६
के हामीले सोचेका छौँ – महिनावारीमा प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याडबाट वातावरणलाई कतिको हानी भइरहेको छ ? हामीले प्रयोग गर्न प्याडमा करिब ९० प्रतिशत त प्लाष्टिक नै हुन्छ । यसले प्लाष्टिक पोलुसनको करिब ३० प्रतिशत ठाउँ ओगटेको छ । प्याड प्रयोग गरे पछि त्यसलाई फाली दिने बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।
जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ मान्छेले समाधानको खोजी गर्छ । यसै समस्याको समाधानका निम्ति एक युवा समूह ‘मण्डन’ले वातावरण मैत्री सेनेटरी प्याड बनाउन थालेको छ I
कसरी बन्छ वातावरण मैत्री सेनेटरी प्याड ?
प्याडको तल्लो र मत्थिलो भागमा नरम सुतीको कपडा प्रयोग हुन्छ। दोस्रो तहमा वाटर प्रुफ कपडा प्रयोग हुन्छ जसले महिनावारीको रगतलाई बाहिरी लुगामा लाग्नबाट बचाउँछ । दोस्रो तह भन्दा माथि सेतो फलाटिनीको भुवा भएको कपडा प्रयोग हुन्छ जसले महिनावारीको रगत सोस्ने काम गर्छ । प्याडलाई सही ठाउँमा अड्याएर राख्न प्याडमा बटन लगाइन्छ ।
कपडाले बनेको सेनेटरी प्याड लगाउँदा हामीलाई के फाइदा ?
— नरम सुतीको कपडाको प्रयोगले योनीमा हावाको आवतजावत उच्च राख्दछ । यो प्रयोग गर्दा छालामा डाबर आउँदैन।
— पुर्न प्रयोग गर्न नमिल्ने डिस्पोजेवल प्याडको सिन्थेटिक फाइबरले योनीलाई सुख्खा बनाउँछ । योनीको प्राकृतिक चिसोपना नहुँदा महिलाहरूलाई धेरै पेट दुख्छ । कपडाको प्याडको प्रयोगले दुखाइलाई कम गर्छ ।
— कुनै पनि केमिकलको प्रयोग नहुँदा अन्य पाठेघर सम्बन्धित रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ ।
— वातावरण स्वच्छ रहन्छ ।
एउटा महिलाले आफ्नो जिन्दगीको ७ वर्ष महिनावारीमा बिताएका हुन्छन् । त्यसमा हामीले ४० वर्षमा १७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छौँ । त्यस्तै कपडाले बनेको सेनेटरी प्याड को कुरा गर्नु पर्दा – दिउसोको समयमा प्रयोग योग्य ६ लेयरको प्याडको मुल्य २०० रुपैयाँ टोकिएको छ र रातीको समयका लागी ८ लेयरको प्याडको मुल्य २५० टोकिएको छ । यदि हामीले २५० बराबारकै एउटा कपडाको प्याड किन्यौँ भने पनि ८ बाट प्याडले वर्षौँ पुग्छ ।
अहिले समयका कामकाजी महिलाहरूलाई कपडाको प्याड धोएर सुकाउन झन्झट लाग्ने हुनाले युवतीहरू माझ यो प्याड लोकप्रिय हुन समय लाग्छ । तर, अलि उमेर पुगेका गृहणीले भने कोस्मेटिक पसलहरूबाट कपडाको प्याड खरिद गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको समय ‘मण्डन’का ७ टिम सदस्यहरूले मण्डन नगरपालिका लगायत अन्य गाउँहरूमा यी प्याड सित् तैमा वितरण गर्दै छ । कपडाको प्याड सँगसँगै उनीहरूले ‘मेन्सट्रुवल हाइजेन’को ज्ञान गाउँठाँउ, स्कुलहरूमा चेतानात्मक कार्यक्रम मार्फत अघि बढ्दै छन् ।
जसरी अहिलेको समयमा स्वास्थ्य र वातावरण बिग्रँदै छ, कपडाको प्याडको आवश्यकता केही वर्षमा प्रबल हुनु निश्चित देखिन्छ । भविष्यको लागी यस समूहले अहिले गरेको सङ्घर्षलाई निरन्तर प्रतिबद्धता साथ अघि बढ्न तपाई-हाम्रो साथ अत्यावश्यक छ ।
(मण्डन संस्थाकी अध्यक्ष जानुका थापासँगको कुराकानीमा आधारित)